कसरी बनाउने वक्षस्थललाई आकर्षक ? – rastriyakhabar.com
महिलाको समग्र सौन्दर्यको एउटा हिस्सा हो, स्तन एवं वक्षस्थल । यद्यपी स्तनको बनौट वा वान्कीले त्यस कुराको निर्धारण गर्छ, त्यो आकर्षक छ/छैन भन्ने कुरा । सौन्दर्यको मानक अनुसार स्तन कस्तो हुनुपर्छ भन्ने एक किसिमको मापदण्ड हुन्छ ।
यद्यपी स्तन झोलिएको हुनसक्छ । शिथिल हुनसक्छ । धेरै भद्दा हुनसक्छ । अस्वभाविक सानो हुनसक्छ । यस किसिमको स्तनलाई आकर्षक मानिदैन । गर्भावस्था, हर्मोनको उतार-चढाव र बढ्दो उमेरसँगै स्तनको सौन्दर्य पनि फिका हुँदै जान्छ । यो प्राकृतिक प्रक्रिया नै हो ।
यद्यपी स्तनको सौन्दर्य कायम राख्न सकिन्छ । यसका लागि अहिले विभिन्न विधि अपनाउने गरिन्छ । कृतिम तरिकाले पनि स्तन सुडौल बनाउन सकिन्छ । सर्जिकल विकल्प पनि उपलब्ध छ । यद्यपी सबैभन्दा राम्रो विकल्प हो, प्राकृतिक तरिका । प्राकृतिक विधीबाट स्तन सुडौल बनाउन सकिन्छ यो प्रभावकारी पनि हुन्छ ।
कसरी बनाउने सुडौल स्तन ?
उन्नत र पुष्ट स्तनका लागि स्वास्थ्य पनि राम्रो हुनुपर्छ । शरीरलाई सहि पोश्चरमा राख्नुपर्छ । पोष्टिक भोजन नियमिन रुपले लिनुपर्छ । पुरा निन्द्रा लिनुपर्छ । मानसिक रुपले शान्त रहेर खुसी हुने प्रयास गर्नुपर्छ । यसा साथै हातले गर्ने काम गर्नुपर्छ, जसले स्तनको व्यायाम हुन्छ । स्तनको मसाज गर्नुपर्छ । यसले अविकसित वा सिथिल स्तन पुष्ट हुन्छ ।
स्तनलाई आकर्षक बनाउनका लागि केहि व्यायाम वा योगासन हुन्छ । त्यस्ता व्यायामलाई विधिपूर्वक अभ्यास गर्नुपर्छ । पुशअप जस्ता व्यायामले छाती कसिलो र आकर्षक बनाउन सकिन्छ । यससँगै उचित साइजको ब्रा लगाउनुपर्छ । ब्राको साइज सही हुनुपर्छ ।
जगिङ जस्तो व्यायाम गर्दा स्तन झोलिने हुन्छ यस्तो बेला स्पोर्ट्स ब्रा लगाउनुपर्छ ।
– पुशअप गर्दा केवल कुहिना मोड्नुपर्छ शरीरको अन्य भाग मोड्नु हुँदैन । शरीरलाई तल लाने र माथि उठाउने अभ्यास गर्नुपर्छ । यस्तो अभ्यास निरन्तर २०-२५ पटक गर्नुपर्छ ।
– एउटा हातको हत्केला स्तनको तल राख्ने । स्तनलाई हातमा राख्न दिने र अर्को हातलाई स्तनको माथि राख्ने ।
– अब दुबै हातले गोलाकार घुमाउँदै मालिस गर्ने ।
१. व्यायाम गर्नुअघि स्पोट्स ब्रा लगाउनुपर्छ, जसले प्रत्येक जम्प वा स्टेपमा स्तनलाई कसिलो बनाउँछ ।